मलेसिया गएको छोरा बाबु बित्दापनि आएन — Cyber Headline
उदयपुर, चैत १४- उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका ७ विजनबारीकी मनमाया कार्की ६५ वर्षकी हुनुभयो । श्रीमान गुमाएको ८ वर्ष र छोरो मलेसिया गएको १० वर्ष भयो । अहिले घरमा मनमाया एक्लै हुनुहुन्छ । छोरो इवाराज मलेसिया जाने वेला बुबा साह्रै बिरामि पर्नु भएको थियो । इवराजले पैसा पठाउलान र उपचार गरौंला भन्दाभन्दै २०६५ सालमा उहाँको ज्यान गयो । बाबु बित्दापनि इवराज घर फर्किनु भएन । इवराज मलेसिया गएको दुई वर्ष भएको थियो । घरमा दुई छोरा, तीन बुहारी र एउटी नातिनी थिइन् । मलेसिया गएको केही समयसम्म इवराजले पैसा र चिट्ठी पनि पठाउनु भएको थियो ।
यता घरमा बुबाबिते उता इवराज पनि सम्पर्क बिहिन हुनुभयो । तर छोरो पैसा कमाएर फर्किएला भन्ने आस थियो मनमायालाई । बुहारी र नातिनी उहाँसँगै थिए । केहि समय त कुनै अप्ठेरोमा पर्‍यो होला ! फोन गर्ला भन्ने आस गरिरहेका थिए । तर लामो समयसम्म इवराजको कुनै खवर आएन । त्यसपछि मनमाया उहाँलाई मलेसिया पठाउने उदयपुरको म्यानपावर खुम्वु ओभरसिजमा जानुभयो । म्यानपावर कम्पनीले पनि केहि थाहा नभएको र आफूलाई थाहा नहुने बतायो ।
इवराजको खवर नआएपछि बुहारी नातिनी लिएर माइत गइन् । श्रीमानको अत्तोपत्तो नभएपछि ११ वर्षे छोरीलाई माइतमै छाडेर बुहारी रुपा पनि अहिले दुवई गएकी छन् । मनमाया भन्नुहुन्छ, ‘अव मैले कसको मुख हेरेर चित्त बुझाउनु ।’ छन त घरमा जेठो र कान्छो छोरो छन् । इबराज माइलो हो । ‘घरमा हुनेको भन्दा परदेशीको ज्यादा माया लाग्दो रहेछ’ मनमायाले भन्नुभयो – ‘माइला साह्रै तनाव भाछ जसरी भएपनि फर्कन है ।’
इवराज किन फर्किएनन् परिवारलाई पनि थाहा छैन । कतै अप्ठेरोमा पो परेकी ! खर्च पठाउँदै गरेका इवराज एक्कासी हराए । मनमाया भन्नुहुन्छ, ‘बाबु त भेटेन, अव छिट्टै फर्किएन भने मलाई पनि भेट्दैन होला !’
वैदेशिक रोजगारीका नाममा तीन जना ...
घाँटी रेटेर हत्या गर्न खोजिएका ...